Pachís 🎲 प्रविष्ट गर्नुहोस्, रमाईलो गर्नुहोस् र Emulator.online बाट खेल्नुहोस्
पार्चेसी। संसारभरका मानिसहरुको पुस्ताले मन परायो, पार्कीस एक बोर्ड खेल हो कि खुशी र यसको सरलता मा मनोरन्जन। Parcheesi को इतिहास र जिज्ञासाहरु हेरौं।
Parcheesi: कसरी चरण step बाट चरणमा खेल्ने
पार्चेसी के हो? 🎲
लुडो खेल एक बोर्ड खेल हो कि कुनै परिचय को आवश्यकता छ। पूर्व परम्परागत खेल बच्चाहरू र वयस्कहरूलाई सँगै घरमा वा बाहिरी ठाउँमा एकसाथ ल्याउन यो उत्तम विकल्प हो।
Parcheesi को नियमहरु
टाईल्स पछाडि जान सक्दैन, तिनीहरू केवल एक विरोधी घडीको दिशा मा अघि बढ्न सक्छ, र अन्तिम घर प्रवेश गर्न तपाईंले सही संख्या रोल गर्नु पर्छ।
यदि बाहिर आउने संख्या आवश्यक भन्दा बढी छ र मोहराले अन्तिम वर्गमा प्रवेश सार्दछ, तपाईंले बोर्ड फेरि एक पटक फेर्नुपर्नेछ।
खेलाडीहरू हुन् तिनीहरूले पालो लिन्छन् पासा रोल गर्न।
कार्ड उसको घर वा सुरुवाती बाकसबाट हटाउनको लागि, सहभागी नम्बर get पाउनु पर्छ (केहि स्थानहरूमा नम्बर।)। त्यतिन्जेल तपाई त्यस वर्गमा रहनु पर्छ र तपाईको पालो पनि बनी रहनु पर्छ।
छैठौं पर्चेसीको होली ग्रेल छ, यो एउटा टुक्रालाई squ स्क्वायर अग्रिम गर्न र पासा फेरि रोल गर्न अनुमति दिन्छ।
यदि तपाईं पासा संग रोल एक प row्क्तिमा 6, सार्न को लागी अन्तिम प्यादा हुनेछ सुरू वर्गमा फर्केर दण्ड दिइयोखेलको सुरूमा प्यादीहरू भएको ठाउँमा।
पार्चीसीमा, यो अनुमति छैन कि २ भन्दा बढी टुक्राले उहि समान बोर्डमा कब्जा जमाउँछ।
यदि त्यहाँ एकै वर्गमा दुई टुक्रा छन् भने, "टावर" वा "बाधा" बनेको हुन्छ अन्य र colors्गहरूको क्रसवाक रोक्दछ।
बाधा केवल यसको सिर्जनाकर्ता द्वारा हटाउन सकिन्छ। यदि यो खेलाडी मर्नमा ls रोल हुन्छ भने, उसले आफ्नो संरचना भत्काउन बाध्य हुनेछ, टावरमा प्यादाहरू मध्ये एक सर्दै।
यदि कसैले पासा घुमाउँदछ र उहि ठाउँमा अवतरण समाप्त हुन्छ जहाँ एक साथी पहिले नै छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण साथी सुरुमा फिर्ता जानु पर्छ। यो आन्दोलन भनिन्छ "विपक्षीलाई खानुहोस्"।
परचेसीको इतिहास 🤓
ईतिहासले भन्छ खेलले पार्चेसीलाई जन्म दिनको जन्म भारतमा भएको थियो धेरै समय पहिला, छैठौं शताब्दीको मध्यमा।
बोलाइयो Pachisi , यो प्रख्यात मा खेलाइएको थियो अजंता गुफाहरू , को राज्य मा स्थित महाराष्ट्र
यसको पहिलो प्रतिनिधित्व भुइँ र गुफाहरूको भित्तामा देखा पर्दछ, जुन हो एक बोर्ड को रूप मा प्रयोग।
एक जिज्ञासा भनेको ठीक यो छ किनकि यसको मूर्तिकार र गुफा चित्रकलाको सम्पत्ती को कारणले दोस्रो शताब्दी ई.पू.आज बत्तीस गुफाहरू मिलेर बनेको यो वास्तुकला परिसर युनेस्कोको विश्व सम्पदा हो। भारत भ्रमण गर्ने सबैको लागि पर्यटन स्थल हेर्नुपर्दछ।
पुरानो कथाहरूमा चिन्ह लगाइएको अर्को जिज्ञासा भनेको भारतीय सम्राटभन्दा थोरै "अन्तर्क्रिय" थियो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर Pachisi खेल्न आविष्कार। साधारणतया खेलको एक प्रत्यक्ष संस्करण सिर्जना गर्‍योबोर्डमा टुक्राहरू बदल्दै उसको हेरेमका आइमाईहरू राख्दै।
पार्चेसी र यसका विभिन्न नामहरू
१ th औं शताब्दीको अन्तमा ब्रिटिश उपनिवेशको साथ सबै कुरा राम्रोसँग नक्कल भएपछि, Pachisi विदेशमा आफ्नो पहिलो कदम उठाए.
ब्रिटिश साम्राज्यका उपनिवेशहरूले यो खेललाई यूनाइटेड किंगडममा ल्याउन धेरै समय लागेन, जहाँ केही अनुकूलता पछि यसलाई आधिकारिक रूपमा लुडो (ल्याटिन "" खेल ") राखियो र यसैले १ 1896 XNUMX in मा यसलाई पेटेन्ट गरियो।
त्यस पछि के थाहा हुन्छ कि त्यो खेल "गयो" र यात्राको बखत, लुडो र यसका विभिन्न संस्करणहरूले धेरै नामहरू मार्फत विश्वका धेरै देशहरूमा लोकप्रियता प्राप्त गरे.
जर्मनीमा उदाहरणका लागि लुडोलाई “Mensch ärgere dich nicht", जसको अर्थ केहि"साथी पागल छैन", र यसको डच, सर्बो-क्रोएसियाई, बल्गेरियाई, चेक, स्लोभाक र पोलिशमा बराबर नामहरू छन्, जहाँ यसलाई अझ राम्रोसँग चिनिन्छ चीनियाँ ("Chine (s) e")।
स्वीडेनमा, यो "Fia", ल्याटिन शब्द फिएटबाट आएको नाम, जसको अर्थ"त्यसो गर"।
नाममा सामान्य भिन्नताहरू "Fia-spel"(खेल फिया) र"Fia मेड नफ"(एक धक्का संग फिया)। डेनमार्क र नर्वे, अनौठो कुरा, लुडो नाम राखिएको थियो।
उत्तर अमेरिकामा यसलाई भनिन्छ, स्पेनमा जस्तै, पर्चेसी। तर त्यहाँ बिभिन्न ब्रान्डहरू द्वारा सिर्जना गरिएका भिन्नताहरू पनि छन् माफ गर्नुहोस्! र समस्या।
र स्पेनमा हामी सबैलाई पर्चेसी भनेर चिन्छौं।
Parcheesi का जिज्ञासा 🎲
याद गर्न सजिलो छ कि तुलनात्मक रूपमा सरल नियम को लागी धन्यवाद, Parcheesi को खेल उपयुक्त छ सबै उमेर, कि बच्चाहरू एक अर्कासँग वा परिवारको बाँकी भागसँग खेल्न सक्छन्। सब भन्दा सामान्य यो हो कि २ देखि players खेलाडीहरू खेल्छन्, तर हामी खेल्ने प्रकारहरू पनि फेला पार्दछौं दुई वा बढी खेलाडीहरू। यस अवस्थामा, र colorsहरू पहिले नै परम्परागत रातो, निलो, पहेंलो र हरियो थप गरियो।
एक रेसि। खेल
ती मानिसहरू जो यस आश्चर्यमा उदासीन पारित गर्न व्यवस्थित गर्छन् र राम्ररी जान्दैनन् कि यसको बारेमा के हो, यो पार्चीसी एउटा बोर्ड खेल हो जुन २, or वा players खेलाडीहरू द्वारा खेल्न सकिन्छ (यस अवस्थामा जोडी गठन गर्न सक्नुहुन्छ).
पारचेसीको बोर्ड वर्गाकार छ र क्रसले चिनो लगाएको छ, क्रसको प्रत्येक पाखुरामा फरक रंग हुन्छ (सामान्यतया रातो, पहेंलो, हरियो र निलो).
प्रत्येक खेलाडीले उसको pieces टुक्रा बनाउनु पर्छ, "प्यादे"वा"घोडा", बोर्डमा राउन्ड पूरा गर्नुहोस् र अन्यको अगाडि अन्तिम वर्गमा पुग्नुहोस्।
जस्तो? पासा खेल्दै! यो सहि छ, पार्चेसी भाग्यको खेल हो, तर कम रोमाञ्चक छैन।
दुई साझा खेलहरू
तपाईंले पक्कै देख्नुभएको छ कि यस खेलमा बोर्ड मोड्न पनि समावेश गर्दछ गुजको खेल। बाट पनि दुइतर्फी, तर थोरै फरक डिजाइनको साथ हाम्रो पर्चिस वाई ग्लोरिया खेल हो। क्लासिक कथाहरूबाट प्रेरित "कमिला र टिभी"वा"फक्स र क्रो",3बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरूलाई दुई खेलसँग रमाईलो गर्न अनुमति दिँदछ। यसको टुक्राहरू घोडा जस्ता आकारका छन्।